Shiinaha oo ka laabtay mamnuucitaankii adeegsiga dhuxusha - BBC News Somali
Shiinaha oo ka laabtay mamnuucitaankii adeegsiga dhuxusha
Image caption Qoysas badan oo Shiinays ah ayaa dhuxusha u adeegsada in ay guryaha ku kululaystaan
Dawladda Shiinaha ayaa qaar ka mid ah magaalooyinka waqooyiga ku yaalla u ogolaatay in ay shitaan dhuxusha, iyaga oo si ku meelgaar ah uga laabtay siyaasaddii ay horay u qaateen, iyadoo uu dalkaasi wajahayo qabaw aad u daran.
Beijing ayaa xiligan qaboobaha ah mamnuucay in la adeegsado dhuxul, iyada oo qaadatay qorshe ay ku doonayso in ay ku yaraynayso wasakhaynta hawada.
Wakhtiyadii qaboobaa ee u dambeeyay waxaa waqooyiga Shiinaha aad loogu arkayay hawo wasakhaysan oo sidii ceeryaamo isugu gadaantay.
Laakiin hadda waxaa lagu soo warramayaa in malaayiin dad ah aysan haysanin wax ay isku kululeeyaan oo ku filan, ka dib markii ay ku guuldaraysteen in ay dhuxulahii ay isku kululayn jireen ku badalaan waxyaabo dareereyaal ah oo qaboobaha la shito.
Dhuxusha la mamnuucay ayaa sidoo kale la sheegay in ay horseeday gaas yari ka dib markii ay dadku suuqyada ku yaaceen si ay u raadsadaan wax ay isku kululeeyaan oo aan dhuxul ahayn.
Diyaaradaha dagaalka Shiinaha oo carqaladeeyay diyaarad uu Maraykanku leeyahay
Warbaahinta Shiinaha ayaa ku warrantay Khamiistii in wasaaradda deegaanku ay soo saartay amarkan oo qabanaya 28 magaalo oo ku yaalla waqooyiga-bari ee Shiinaha.
Image caption Qaboobihii u dambeeyay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Beijing ayuu qiiq isku gadaamay
Warkaas ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay "ogaatay in goobaha qaar aysan ka hir galin qorshihii dadka lagu wada gaadhsiin lahaa wax ay ku badashaan dhuxusha sida koronto iyo ama gaas, taasina ay jahwareer keentay".
Milatariga Shiinaha oo markii koobaad samaystay Markab diyaaradaha xambaara
Waxayna wasaaraddu intaas ku dartay in ay goobahaaas u fasaxday in ay shitaan dhuxusha, waxayna ku macnaysay in ay waajibtahay "in ay sii wadaan xaqiijinta hadafka koobaad ee ah in dadku ay heleen wax ay isku diiriyaan inta qaboobaha lagu jiro".